Sambany Ny Sazy An-tranomaizina Voalohany No Hita Ao Amin’ny RuNet Noho Ny ‘Fampiroboroboana Ny Fihetsika Mahery’ Ety Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Sambany Ny Sazy An-tranomaizina Voalohany No Hita Ao Amin'ny RuNet Noho Ny ‘Fampiroboroboana Ny Fihetsika Mahery’ Ety Amin'ny Media Sosialy
Voadika ny 02 Desambra 2015 2:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, বাংলা, македонски, English
Tany am-piandohana dia vitan'izao mpampiasa tratra nanely zavatra mampiroborobo ny mahery fihetsika tao amin'ny RuNet ny nisoroka ny tena sazy famonjàna. Sary nafangaron'i Tetyana Lokot.
Sambany, nomen'ny fitsaràna Rosiana iray sazy mihatra hiditra am-ponja ny mpampiasa iray voaheloka ho “nanao fampielezankevitra mampiroborobo ny fihetsika mahery tety anaty media sosialy.” Tany am-boalohany, ny sazy tahàka izany dia niafàra tamin'ny fandoavana lamandy na fampiatoana ny sazy.
Olona iray mpampiasa aterineto tao an-tanàna Siberiana ao Surgut no voaheloka hifonja herintaona any amin'ny toby iray fanefàna sazy. Ny fitsaràna monisipaly no nanome ilay sazy herintaona tena izy (fa tsy sazy mihantona) taorian'ny nahitàny ilay olona voampanga ho nizara “zavatra mampiroborobo ny fihetsika mahery ” teny anaty tambajotra sosialy, araka ny voafaritry ny Andininy faha-282 amin'ny Lalàna Rosiana momba ny ady heloka. Araka ireo tatitry ny mpampahalàla vaovao, nametraka feo sy lahatsary aloha ilay mpampiasa, Oleg Novozhenin, tany am-boalohany “nankalazàny ny hetsik'ilay” fikambanana antoko Okrainiana tia tanindrazana “Right Sector” (voaràra any Rosia amin'izao fotoana izao) sy ny “Azov”, ilay andiany mpirotraka an-tsitrapo avy amin'ny elatra havanana.
Tsy ity no voalohany nanamelohana ireo mpampiasa taminà zavatra ataony ety anaty aterineto ao amin'ny RuNet, momba ny heloka mifandray amin'ny resaka fihetsika mahery. Mazàna dia ireo vesatra noho ny “fanentanana hanao fihetsika mahery,” ampivadiana amin'ireo fepetra tsy mitsahatra mitombo momba ny famoriana olona sy hetsi-panoherana misy faneriterena, no mitondra ireo mpampiasa ho anaty raharaha mivaivay. Ny famerenana mibitsika sary iray, na lahatsoratra iray ao amin'ny VKontakte, dia efa mety hovidiana lafo ho an'ireo olompirenena Rosiana afaka miditra tsy misy fetra amin'ny aterineto, na dia sariitatra iray misy an'i Donald Duck tsy tia fasista aza.
Manjavozavo ihany ny famaritana omen'ny Andininy faha-282 ao amin'ilay lalàna famaizana heloka bevava ny atao hoe “fampiroboroboana ny fihetsika mahery” ary ampiharina be ho toy ny fitaovana fanivànana. Miaraka amin'ireo lalàna hafa famoretana, niafàra taminà tranganà raharaham-pitsaràna maromaro izy io, saingy amin'ny ankamaroan'izy ireny, miafara amin'ny fampiatoan'ny fitsaràna ny sazy, ny fanasaziana ara-pitantanana, na sazy ara-bola ny raharaha. Ankehitriny, niteraka ny sazy mihatra voalohany fampidirana am-ponja ho an'ny hetsika miresaka “fihetsika mahery” ety anaty aterineto ny didy navoakan'ny fitsaràna tao Surgut.